I-China Fused Silica Sand Umkhiqizi Nomphakeli | I-Dinglong
Isihlabathi sethu se-silica esifakiwe senziwe nge-silica ephezulu. Ngobumsulwa obungu-99.98%, izihlabathi zethu ze-silica ezifakiwe azicishi umlilo, zinenhlanzeko, ziyamelana ne-UV futhi azinakuvinjelwa. Itholakala ngezinhlobonhlobo zamasayizi wezinhlayiya ezijwayelekile futhi ingahle yenziwe ngezifiso ekucacisweni kwakho.
I-chemistry evelele ngokuya kokungcola okuncane - okuholela emandleni ashisayo amahle kakhulu
Kutholakala ngosayizi abahlukahlukene bezinhlayiya futhi kungenziwa ngezifiso kokucaciswa kwakho
Isetshenzisiwe Futhi Ithembekile Kuzo Zonke Izimboni
Izinhlabathi ze-silika ezifakiwe ze-Dinglong zinhlamvukazi ezenziwe ngobuchwepheshe ezenzelwe ukusetshenziswa e-Foundry, Refractory, Investment Casting, Electronics kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezikhethekile. Lezi zinhlamvu ze-silica ezihlanganisiwe zenziwe nge-silica ephezulu, kusetshenziswa ubuchwepheshe be-fusion kagesi ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. Izinhlamvu zethu ze-silica ezihlanganisiwe azifakwanga, zinokuzinza okuhle kakhulu kwamakhemikhali futhi zinokuhamba okuphansi kakhulu kagesi.
Izinhlabathi ze-silika ezifakiwe ze-Dinglong ziyatholakala ngobukhulu obuhlukahlukene bezinhlayiyana futhi zingenziwa ngezifiso ekucacisweni kwakho. Njengoba amakhasimende ahlukene enezidingo ezahlukahlukene ngezidingo zawo, simema imibuzo yokucaciswa kosayizi wokusanhlamvu okhethekile. Izinhlabathi ze-silica ezifakiwe ze-Dinglong ziyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Lezi zinhlamvu ezihlanganisiwe zikhiqizwa esikhungweni esiqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini Izinto ezihlanganisiwe ze-Silica Grain Refractory
Olandelayo: I-Silica Grain ehlanganisiwe